Thursday October 01, 2020 - 11:59:44 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maxkamad kutaal wadanka Hindiya ayaa burburisay kiisas ku saabsanaa dumin loo geystay masjid ay leeyihiin muslimiinta waqti hadda laga joogo 28 sanadood.
Dowladda Hindiya ayaa sheegtay in aan wax dambi ah loo haysan mas'uuliyiin dowladda katirsan oo ku lug lahaa burburinta masjidka baaberi kadibna lagu bedelay macbad ay leeyihiin gaalada mushrikiinta Hinduuska.
Maxkamad Hindi ah oo ku taalla gobolka Lakaawa ayaa wax dambi ah ku weysay 32 qof oo lagu eedeeyay in ay galeen dambiyo dagaal intii lagu guda jiray weerarkii iyo burburinta masaajid sanaddii 1992-dii kaas oo horseeday inuu ka qarxo rabshado u dhexeeya Hinduuska iyo Muslimiinta kaas oo ay ku dhinteen laba kun oo qof.
Eedeysanayaasha waxaa ka mid ahaa afar hogaamiye oo ka tirsan xisbiga hadda wadanka xukumo ee lagu magacaabo Bharatiya Janta Party ayaa lagu waayay wax danbi ah taas oo ka dhigan in dowladda hindiya ay bari yeeshay saraakiisheeda aysan waxba kasoo qaadin dadkii muslimiinta ahaa ee lagu xasuuqay dhacdadaas foosha xun.
Afarta hogaamiye ee xisbiga ayaa lagu eedeeyay inay jeediyeen khudbado kiciyay tobanaan kun oo taageerayaashooda hinduuska ah oo xero ka sameystay magaalada Ayoodhya, maalin ka hor weerarkii kumanaan Hindus ah ay ku qaadeen masjidka kaasoo ay ku burburiyeen faasas iyo budad.
Sannadkii hor Maxkamadda Sare ee Hindiya waxay xukuntay in laga dhiso macbudka Hinduuga goobta lagu muransan yahay. Dadka Hinduuska ah ayaa aaminsan in wax ay ugu yeereen ilaahooda uu halkaas ku dhashay waxayna sheegeen in Imbaraadoorkii Muslimka ahaa ee Baabur uu masjid ka dhisay dusha macbadka goobtaas.
Maxkamada ayaa sidoo kale xukuntay in duminta Masjidka Baabri ay aheyd mid sharci daro ah, waxayna amartay in maxkamad gaar ah oo la xiriirta duminta masjidka si deg deg ah loo soo afjaro.
Afarta hogaamiye ee xisbiga ayaa sheegay in duminta masjidka ay ka dhalatay qarax kadis ah oo ay geysteen dhaq dhaqaaqa Hinduuga careysan ah iyagoo umuuqday in ay ka been sheegayaan sidii ay wax udhaceen Qaadiga maxkamad gaaleedka ayaa ku andacooday in kiiska uusan haysan caddeyn sharci ah oo cadeynaysa ku lug lahaanshaha eedaysanuhu wax shirqool ah.
Muslimiinta Hindiya ayaa tacadiyo dhan walba ah kala kulmaya gaalada hinduuska ah ee ladowladeeyo waxaana shantii bilood ee lasoo dhaafay jiray dibad baxyo ay muslimiintu dhigayeen